IJalimane inezintaba ezinhle kakhulu, emaphandleni adonsa umoya, kanye nemizi ehlukahlukene eyenza ukuhamba ngesitimela lapho kube yinto ehehayo. Bangu ezindaweni eziningi fabulous ukubona kufaka phakathi iBerlin, I-Munich, Hamburg, E-Cologne, futhi Frankfurt, nabanye abaningi. Lezi okushisayo emadolobheni amancane konke oxhumene by kahle ihlelwe hi-speed uhlelo isitimela. Lokhu kwenza isitimela sokuvakasha eJalimane lula kangaka. Lapha liyisiqondiso holidaymakers ngoba isitimela sokuvakasha eJalimane ukuze kuqinisekiswe ukuthi iningi uhambo kujabulise kungenzeka.
Ukusetshenziswa best of zemininingwane Izikhangibavakashi eJalimane emini, kuhlanganise okusheshayo phakathi kwamadolobha Express, akudingi ukubhuka kwesihlalo. Nokho, uma uhlela uhambo lwakho ayikho ingozi e yokubhuka izihlalo zakho kusengaphambili. Vikela isihlalo iwindo olubonisa indawo ezungezile noma nje ukhethe esihlalweni sakho ukuqinisekisa ukuthi indvudvuto esiphezulu.
Abanye izitimela International futhi imizila ngobusuku obubodwa njengokuthola Paris, EBrussels, I-Venice, noma Copenhagen musa adinga ukuthi ube ukubhuka ngaphambi kokugibela. Lapho usebenzisa i-Londoloza Isitimela indawo ukubhuka amathikithi akho isitimela, ngeke sibeke ingabe uyafisa yini ukuthi ziyadingeka ukwenza ukubhuka.
Germany liyindawo enkulu ukuba ukuhamba nomkhaya. On ujantshi izitimela German, izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha zihamba mahhala kungadingeki thikithi. Izingane phezu 6 kodwa abaneminyaka engaphansi 15 futhi ukuhamba mahhala ngemuva kokuthi ephelezelwa umuntu omdala yokugibela okhokhela.
ujantshi German	Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi	amathiphu isitimela sokuvakasha	travelgermany